Gollaha Wakiilada Dowladda Puntland oo Cod aqlabiyad ah ku Meel-mariyay Xeerka Kufsiga. – Wasaaradda cadaaladda, Arima Diinta iyo Dhaqan celinta Dawladda Puntland Somalia
Xubnaha Gollaha wakiiladda dowladda Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay xeerka kufsiga, kaasi oo gollaha ay u soo gubiyeen wasaaradda cadaalada iyo diinta ee Puntland.
Kalfadhiga maanta oo ay soo xaadireen in kabadan 40 mudane oo ka mid ah 66 xildhibaan ee golluhu uu ka kooban yahay , ayaa ka hor intii aysan cod u qaadin xeerka, waxay ay su’aalo waydiiyay wasiirka wasaaradda Cadaaladda Puntland Saalax Xabiib Jaamac iyo qaar ka mid ah culumadda puntland oo goobjoog ka ahaa doodii xeerka, waxayna sheegeen in xeerkani uu waafaqsan yahay shareecadda islaamka, islamarkaana ka hor imaanayn diinta islaamka.
Xildhibaan Nuuradiin C/rashiid Cali oo ah guddoomiye K/xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee barlamaanka oo xogwaraysi siiyay Sahanonline, wuxuu sheegay in xeerkani uu xadayn doono kufsiyadda lagula kaco haweenka iyo guud ahaan bulshadda inteeda nugul ee aan isdifaacin karin.
“ Dadka dhibaatadda ugu badan ee kufsiga la kulmaa waa qoysaska Barakacayaasha (IDPs) iyo haweenka kale ee u nugul in kufsi wadareed lagula kaco. Xeerkani wuxuu xadeenayaa ama jooninayaa dhibaatadda kufsiga” ayuu yiri xildhibaan Nuuradiin, wuxuuna sii raaciyay.
“ Waa markii labaad ee xeerkan la horkeeno barlamaanka, waanu akhrinay, waana darisnay, su’aalo badan ayaa masuuliyiinta Wasaaradda iyo culumada wax ka waydiinay, Culumadu waxay sheegeen in xeerka akhriyeen, shareecadda islaamkana uusan ka hor imaanayn, masuuliyadda wixii ka yimaadana ay dusha u ridanayaa” ayuu yiri Xildhibaan Nuuradiin.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland
Xeerkan qodobadiisa waxaa ka mid ah in haddii fal kufsi ah uu dhaco, qofkii gaysta lagu qaadi doono xeerka axkaamta, qodobadiisa 27 iyo 29, waxayna ku qotomaan shareecadda Islaamka. Waxaa kaloo uu xeerkan uu tilaam cad ka bixinayaa waxa loo yaqaano Dandaasiga iyo handadaada galmo (Sexual Harassment) kaasi oo qofkii lagu helo la xiri karo 1-3 sanno oo xabsi ah.
Xeerkan Kufsiga oo maanta ay ansixiyeen xubnaha gollaha wakiiladda Puntland waxaa uu si rasmi ah u dhaqan geli doonaa marka uu saxiixo Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali gaas oo haatan safar shaqo ugu maqan dalka dibadiisa.